संसारकै सबैभन्दा वुद्धिमान काग, जो मानिसले जस्तै दिमाग चलाउँछ ! « Lokpath
२०७७, १० कार्तिक सोमबार २३:००
प्रकाशित मिति : २०७७, १० कार्तिक सोमबार २३:००
काठमाडौं । के तपाई विश्वकै सबैभन्दा चलाख कागको दिमाग मानिसको जस्तै हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ ? तपाईलाई औठो लाग्ला तर एउटा यस्तो प्रजातिको काग छ, जसको दिमाग मानिसको जस्तै हुने गर्दछ । उक्त कागले उपकरण बनाएर साना चीजहरूको प्रयोगमा ठूलो उपलब्धि हात पारेको छ ।
यो कुरा सन् २०२० शुरुवातको हो । त्यस समयमा बेट्टी नामको एउटा काग धेरै प्रख्यात भएको थियो । उसलाई कुनै पनि तारमा घुमाएर कुनै हुक कसरी बनाउने भन्ने बारेमा थाहा थियो । तार हुकको सहयोगमा, बेट्टी (क्यालेडोनियन कागहरू) आफैले खाना संकलन गर्थे।
धेरै व्यक्ति बेट्टीको कार्यहरू देखेर छक्क परेका पनि थिए। यस्तो अवस्थामा वैज्ञानिकहरूले यसबारे अनुसन्धान गर्न थालेपछि यो पत्ता लाग्यो कि, अन्य कागहरू पनि बेट्टीभन्दा चतुर छन्। पछि गरिएको अनुसन्धानले पत्ता लगायो कि, बेट्टीको एउटा जातको कागलाई नयाँ कालाडोनियन क्रो भनिन्थ्यो। त्यो प्रजातिको कागले साना चीजहरूलाई उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्ने क्षमतामा ठूलो सफलता हात पारेको हो ।
बेट्टीको आचरण देखेर हामी कागहरूको बारेमा आफ्नो धारणा बदल्न बाध्य भयो । ब्रिटेनको सेन्ट एन्ड्रयूज विश्वविद्यालयका वैज्ञानिक क्रिश्चियन रुट्स भन्छन्स, सबै जातका कागका दिमागमा धेरै अनुसन्धान भएको छ, आश्चर्यजनक उक्त अनुसन्धानमा अचम्मित बनाउने क्षमता फेला परेका छन् ।
कागहरूको अनुसन्धान पछि, वैज्ञानिकहरू कागहरु स्वभावैले चलाख भएको निस्कर्षमा पुगेका छन् । सबै प्राइमेटहरू, मानवहरू सहित, प्राइमेटको दिमागमा एउटा विशेष संरचना हुन्छ, यसलाई नियोकार्टेक्स भनिन्छ। यो विश्वास गरिन्छ कि, हाम्रो दिमागको यस भागले ज्ञानको नयाँ सम्भावनाहरूलाई जन्म दिन्छ। जे होस्, कियोकको दिमागमा नियोकार्टेक्स फेला नपरेको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन्। यसको सट्टामा, उसको दिमागमा स्नायुहरूको एक नेटवर्क रहेको पत्ता लागेको छ। जसले तिनीहरूलाई ज्ञान सम्बन्धित क्षमता प्रदान गर्दछ।
जे भए पनि कागको दिमाग र मानवको दिमाग फरक छ। दुबैमा समस्या समाधान गर्न समान क्षमता छ। तिनीहरूले नयाँ जानकारी र अनुभवहरूमा आधारित आफ्नो सीप सुधार गर्दछन् । क्रिश्चियन रुट्जको काग र अन्य काउन्सिलको अनुसन्धान अनुसार कागहरूले कुनै खास बोटको जरा खोज्छन् र यसलाई हुक जस्तो उपकरण बनाउँछन्।
बेपत्ता विमान ३५ वर्ष पछि अचानक ल्यान्ड हुँदा मच्चियो भागदौड !
काठमाडौं । सारा विश्व रहस्यले भरिएको छ । केहि रहस्यहरु त यस्त छन्
जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा भएका फरक व्यवस्था माथि प्रष्ट…
बेपत्ता विमान ३५ वर्ष पछि अचानक ल्यान्ड हुँदा मच्चियो भागदौड…